Kolovrat - ny dikany
Tamin'ny vanim-potoana fahiny, ny Slavy dia nanisy lanjany lehibe ho an'ireo marika. Izy ireo dia nampiasaina ho toy ny ody am-bava, fa koa mba hananganana fifandraisana ary haneho fanajana ireo andriamanitra. Kolovrat no marika malaza indrindra, fa ny dikany dia fantatra amin'ny vitsivitsy. Hiezaka hamerina ny tsy rariny isika ary hahatakatra ny dikan'io famantarana io amin'ny olona iray.
Inona no dikan'ny Kolovrat?
Ity mari-pamantarana ity dia aseho amin'ny boriborintany miaraka amin'ny tara-koditra miverimberina amin'ny lalana iray. Izy io dia maneho ny fihodinan'ny taona isan-jaton'ilay rakitry ny masoandro ary ny tsy fahitana an'izao tontolo izao. Ny mpiambina dia manambatra ny singa efatra sy ny fizaran-taona efatra, izay tena miseho amin'ny tara-masoandro, izay valo tokoa. Niseho tao Rosia fahiny izy. Ny famantarana ny masoandro dia noheverina ho mahery indrindra, satria ny vatana any an-danitra, ny Slavy dia nantsoina hoe mpamorona ny zavatra rehetra eto an-tany. Nino ny razanay fa nomena hery manokana ny sarin'ny Kolovrat. Nosoratana teo amin'ny rindrin'ny trano izy mba hiarovana azy amin'ny hery mitarika avy any ivelany. Ny sary amin'ny endriky ny masoandro miaraka amin'ny taratra dia hita amin'ny akanjo, lovia, firavaka, sns. Niady tamin'ny sainan'ny Kolovrat ireo mpiady.
Ny astrolôma dia afaka namaritra ny dikan'ny marika hoe "Kolovrat". Nahita izy ireo fa raha mampiasa ny sary an'ohatra, hampifandray ny Polar Star, ny teboka amin'ny ririnina, ny lohataona amin'ny lohataona, ary ny toetoetran'ny fararano na lohataona equinox, dia ampahany amin'izany famantarana izany. Vokatr'izany dia nihevitra izy fa tany am-piandohana dia nanapa-kevitra ny Kolovrat fa afaka mamaritra ny toerana misy azy avy amin'ny kintana.
Ny dikan'ny famantarana hoe "Kolovrat" dia miankina amin'ny fitaratry ny taratra
Ny mari-pamantarana dia mety ho aseho amin'ny taratra mandohalika mamaky ny famantaranandro ary mifanohitra amin'ny famantaranandro. Ao amin'ny fiteny slavonika taloha dia antsoina hoe sira sy saline fanoherana. Amin'ny tranga voalohany, raha tarihina amin'ny tondrozotra ny torapasika, dia mifandray amin'ny marika tsara ny amulet. Ny fananana lehilahy tahaka ny talismanana dia afaka mamantatra ny fahadiovan'ny eritreritra ary mianatra ny maha-izy azy. Izany mari-pamantarana izany dia heverina ho lahy. Amin'ny tranga faharoa, izany hoe, raha tarihina manohitra ny lalana am-pandehanana, dia misy fifandraisana amin'ny tontolo hafa. Ny tompon'ilay talismanana toy izany dia afaka maneho ny fahaiza-manaony ara-tsaina sy ny fahaiza-manao majika hafa. Ampiasaina betsaka koa ny fampidirana. Ny mari-pamantarana toy izany dia heverina ho fombafomba vehivavy.
Ny dikan'ny amulet "Kolovrat"
Hatramin'ny andro fahiny, nampiasaina ny marika hanamboarana simia. Amin'ny ankapobeny, volamena no nampiasaina tamin'izany, izay nahatonga ny lokon'ny masoandro. Misy ihany koa ireo karazana metaly mavo hafa. Ho an'ny Magi, Kolovrat dia singa manan-danja amin'ny fombafomba isan-karazany, satria misy fiantraikany amin'ny fahaiza-manao majika izany. Amin'ny ankapobeny, ny mari-pamantarana dia amlette amin'ny angovo mahery. Raha manana tselika toy izany, dia tsy afaka ny hatahotra ny maso ratsy sy ny fiantraikany ratsy amin'ny lafiny iray ny olona iray.
Ny Slovaky amulet "Kolovrat" dia azo aseho amin'ny endrika marobe:
Ny masoandro misy rantsana valo. Manana lehilahy mpiambina toy izany, dia omena ny herin'ny masoandro.
Masoandro misy rantsana enina. Ity famantarana ity dia antsoina ihany koa hoe kodiarana Perunovo. Misaotra azy noho ny fiarovana an'i Perun.
Ny masoandro misy taratra efatra. Ity ampondra ity dia mariky ny afo eto an-tany.
Ireo olona manana ny "Amboara" Kolulrat, dia lasa tombony vintana. Ny olona tsara ihany no afaka miantehitra amin'ny fanampiany.
Raha efa nividy talismanana toy izany ianao dia tsy maintsy ampangaina. Ataovy izany mandritra ny ora roa ao anaty rano. Raha ny tsara indrindra, raha afaka mametraka azy ao amin'ny renirano ianao. Noho izany dia hodiovina ny fandevenana. Aorian'izany dia tsy maintsy entina avo telo heny ny afo. Tsara raha kitay vita amin'ny hazo. Mitondrà talismanana miaraka aminao mandritra ny telo andro, izay ahafahanao mamaly izany amin'ny herinao manokana.
Valkyrie amin'ny angano slavy - iza no Valkyries ary ahoana no fijerin'izy ireo?
Edgar Cayce - faminaniana
Fifandraisana amin'ny biorhythms
Andriamanitra Seta tao amin'ny angano Ejiptiana fahiny
Monina Loch Ness - zava-misy mahaliana sy hevitra momba an'i Nessie
Andriamanitra andriamani-bavy Kali - ny fomban'ny andriamanibavin'ny fahafatesana
Ny Angano japoney - Andriamanitra sy ny demony
Ny necrosis séptic de la head femoral
Akanjo fitondra amin'ny ankizivavy feno
Isam-bahiny any amin'ny Ranomasina Mediterane
Soup miaraka amin'ny fofom-baraka voasesika - sakafo mahasalama amin'ny loha laharana voalohany
Amin'ny firy no azo atao ny bevohoka aorian'ny asa na asa?
Ginger Spice dia nizara ny sarin'ny zazalahy vao teraka voalohany
Gout amin'ny tongony
Nahoana no tratran'ny taolan-taolana ny tratrako?
Ny tsilo miloko (moka) - mari-pamantarana sy loto mifandraika amin'ny fampiasana
Inona no atao hoe famonoan-tena?
Ravioli miaraka amin'ny hena
Ahoana ny fomba hanesorana ny fitiliana amin'ny bronchi?
Marinady ho an'ny duck - recipe
Ny dadaben'ireo tovovavy no tsara indrindra: ireo porofo 27 tsara indrindra!